Caafimaadka — Caasimada Online | Isha Wararka Sugan
Warbixin Naxdin leh: Imisa qof ayaa ku qaada Somaliland HIV/AIDS bil kasta?	January 1, 2013 6:00 AM0 comments	Hay’adda la dagaalanka cudurka dilaaga ah ee HIV/AIDS ee maamulka Somaliland (Somaliland National Aids Commission) ayaa shaacisay qiimeyn ay sameysay oo sheegeysa in bil walba 58 qof uu asiibo cudurka AIDS-ka. Cilmi baaris laga sameeyay deegaannada Somaliland ayaa lagu ogaaday in bil kasta ay cudurka HIV/AIDS ay qaadaan dad tiradooda […]
Sii Akhri ›
MAXAA KEENA CINIINNIMADA?	December 28, 2012 12:01 AM0 comments	Halkan ka aqri Waa Maxay Ciniinnimadu Waxaa jira dhowr waxyaalood oo loo aaneeyo inay iyagu sababaan Ciniinnimada ninka iyo carqaladaynta galmada, waana kuwa soo socda:- 1- Niyadda oon joogin:- Ninka oo xilliga galmada niyaddiisu aanay joogin oo meel kale ku maqan, amay murugo iyo cabsiyi hayaan sababo galmada ka baxsan awgood, awoodina waaya […]
Gudniinka Fircooniga ah iyo Galmada	December 26, 2012 1:00 AM0 comments	Gudniinka gabdhaha oo dadyowga Somaliyeed ku dhaqmaan loona yaqaan Gudniinka Fircooniga ah (Female Genital Mutilation) waa qalliin halis ah oo curyaamiya xubnaha taranka ee haweenka iyada oo la minguuriyo ama la gooyo qayb weyn oo ka mid ah xubinta taranka taas oo aan la suuxin xilliga qalliinka lehna xanuun daran […]
Muqdisho: HIV/AIDS oo dawo loo helay	December 18, 2012 2:55 AM0 comments	Dr. Yuusuf Suudaani oo mudo 40 sannadood ah ka shaqeenayay isku daweynta dawo dhireedka oo xarun caafimaadna ku leh magalada Muqdisho, ayaa shaaca ka qaaday inuu daaweeyay dad qabay cudurka dilaaga ah ee HIV/AIDS. Haddii sheegashooyinkiisa sax yihiin waa markii ugu horeysay ee cudurkaas dawo loo helo. Waraysi uu siiyay […]
Maxaad ka taqaan Uur qaadista galmo la’aanta “Artificial Insemination”?	December 11, 2012 12:30 AM2 comments	Mar walba abuurka ilmaha Illaah ayaa ku shaqo leh, oo isaga kaliya ayay u gaar tahay, hase yeeshee waxaa halkan uga hadleynaa marxaladda haweeneyda ay ku uur qaadeyso gacanta ama gacan ku rimiska “Artificial Insemination” Gacan ku rimiska ama waxa loo yaqaano “Artificial Insemination” waa haweenka oo xawada iyo ugxanta […]
MAXAA KEENA AF-QURUNKA?	December 4, 2012 12:07 AM4 comments	Af-qurunka ama waxa loo yaqaanno “Halitosis” waa xaalad qofku ka soo saarayo afkiisa hawo uraysa, taasoo ka duwan af-urka subaxii lala soo tooso, kaasoo ku baab’a naadiifinta ilkaha. Af-qurunka ma laha wax xuduud ah, umana kala sooco dadka da’dooda, noocooda iyo xaaladooda dhaqaalaba, intaa waxaa sii dheer in af-qurunku u […]
Haddaad caruur leedahay iyo haddii kaleba aqri qormadan (fadlan)	November 24, 2012 12:05 AM1 comment	Seexinta carruurta qadada ka dib, faa’iido ma u leedahay? Hurdada duhurkii waa la isku waafaqsan yahay in ay faaido u leedahay qof walba oo jiifto ha ahaado caruur ama qof weynba. Diinteenana waa na fartay in aan jiifsano duhurtii maadaama uusan shaydaanka jiifanin. Cilmibaarista la sameeyay waxaa lagu ogaaday duhurta […]
Maxaad xaqiiqo ah oo aad ka ogtahay Cudurka Alzheimer (Dhimir Beelid)?	November 14, 2012 12:00 AM0 comments	Cudurka Alzheimer waa nooca ugu badan ee caqli suulidda. Caqli suuliddu waxay dhacdaa iyada oo ka dhalata isbeddellada ku yimaada maskaxda ee saameeya awoodda qofku in uu ku fekero oo wax xusuusto. Waxay noqon kartaa mid aad u daran oo saameysa hawlo maalmeedka. Cudurka Alzheimer maahan qayb caadi ah ee […]
Xanuunka caadada “Dysmenorrhoea” (Sababaha iyo sida loo daweeyo).	October 24, 2012 12:03 AM1 comment	Horudhac Waxay dumarka intooda badan la kulmaan nooc xanuun caado inta ay noloshooda jirto. Erayga caafimaad ahaan loogu isticmaalo waa dysmenorrhoea. Xanuunka uu keeno caadaada dhiigga waxaa laga dareemi karaa qaybta hoose ee calooshaada, laakin waxuu u faafi karaa dhabarkaaga iyo cajiradaada. Xanuunka caadada waa xaalad iska dhaco. Waxaa daraasaadka […]
Cayil iyo Caato midkii aad tahayba, qormadan aqri (Fadlan)	October 20, 2012 12:10 AM4 comments	Siyaabaha Miisaankaaga loo maareeyo In aad si xaad dhaaf ah u cayisho waxay halis weyn kuu gelineysaa dhibaatooyin caafimaad sida dhiig kar sare, sonkorow iyo wadne xanuun. Kala doorashooyin caafimaad samee maalin walba halkii aad marna cunto cuni lahayd marna iska joojin lahayd. Si tartiib ah u luminta 227 garaam […]
© Copyright 2015 — Caasimada Online | Isha Wararka Sugan. All Rights Reserved / Designed by Caasimada.com